Melt Blowing Equipment Production Line Vagadziri - China Sungunudza Blowing Equipment Production Line Suppliers & Factory
Genera Nhanganyaya * Iyi tambo yekugadzira inosanganisira yega screw extruder, yakanyungudika-yakaputirwa extrusion furu, transmandi bhandi, mhepo inoisa muchina ... nezvimwe. * Yakazara otomatiki kubva pakudya zvekushandisa kusvika pakupedzisira yakanyungudutswa yakaputirwa machira kumuchina, hunyanzvi hwekugona, kumhanya kwakasimba, PFE inogona kusvika 95 uye pamusoro. * Chigadzirwa chekugadzira kubva ku1500kg, iro chairo dhizaini yekushandisa inoenderana nemuchina we extruder uye unonyungudutswa nemhepo yakadururwa. Technical Paramende 1.Model: HL-1600 2.Production Type: Vertical Blow Downward 3.Voltag ...
Yakasarudzika jekiseni rakananga uye kudzorera meltblown giredhi mitsara yekugadzira yevatengi vane yakatarwa kubva ku400mm-1600mm. Mutsetse wekugadzira unodzokorora unogona kushandiswa kwete kungogadzira meltblown machira, asi zvakare mukugadzirwa kwezvinhu zvinogadzirisa zvemvura nezvinogadziriswa zvemhepo. Liquid filters zvinhu zvinonyanya kushandiswa muminda yekurapa kwemvura, peturu uye makemikari indasitiri, ine yunifomu chimiro, yakakwirira filtration kurongeka, pachena maitiro, uye yakasimba po ...
Midziyo mikuru yebetsero yekunyungudutsa uye kupuruzira yekugadzira mutsara ndiyo yekufa musoro yekuchenesa vira Mushure mekugadzira kwenguva yakati rebe, kusviba kweiyo gomba plugging kunoitika. Panguva ino, zvinodikanwa kutsiva jekiseni rakanyungudutswa rinofa. Iyo inotsiva jekiseni kufa musoro inoda kudzingwa kubvisa yakasara polymer nekusachena mumusoro unofa. Chikamu uye spinneret zvinowanzo kuvezwa kuti vabvise zvakasara polymer nekusachena. Uye izvo zvisvinu zvezvinyungudiki -...